ဗလာဒီမီယာပူတင် – Pann Satt Lann Books
ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်သည် ရုရှားနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ကြာ ခေါင်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအလယ် ထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ ပူတင်၏ လူငယ်ဘဝရည်မှန်းချက်မျာ စပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ဥပဒေပညာဘွဲ့ကို အရယူခဲ့သည်…
ရုရှားထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့ ကေဂျီဘီတွင် (၁၆)နှစ်တာ အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပြီးနောက် ကေဂျီဘီမှ နှုတ်ထွက်ကာ နိုင်ငံရေးလောကတွင်းသို့ ခြေချဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပူတင်၏ သူ မတူသည့် အရည်အချင်းများကြောင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်…
၁၉၉၉ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး တရားဝင်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပူတင်သည် ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန် ရုရှားနိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ကို ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး အထင်ကရ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပင် ဖြစ်ပေသည်…
ရုရှားနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း(၂၀) ကြာ အုပ်ချုပ်ခေါင်းဆောင်နေဆဲဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့သြဇာအညောင်းဆုံး အထင်ကရခေါင်းဆောင် ဗလာဒီမီယာပူတင်အကြောင်းဖြစ်ပြီး သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာပေ နှစ်သက်ဖတ်ရှုသူတို့အတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်….
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2020 ဖေဖော်ဝါရီလ (ပ-အကြိမ်)
“ဗလာဒီမီယာပူတင်” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply